Phytophthora na tomato: otu esi emeso ero n'ọhịa na na griin ha iji chekwaa tomato, nkọwa nke mgbochi iji chekwaa akwụkwọ nri na ọgwụgwọ ha, yana foto - Akwukwo nri - 2019
Otu esi emeso blight na tomato: nzọụkwụ site nzọụkwụ
Ọrịa na-egbu oge bụ ọrịa nke sitere na ero ero phytophthora. Ọnọdụ na okpomọkụ na-ekpo ọkụ na-enyere ndị ahụ aka ịmụba. Ọrịa kachasị mma na-enweta ọkara nke oge okpomọkụ. Osisi ndị na-eme phytophthora dịka: a na-enwe ntụpọ na-acha uhie uhie na akụkụ nke elu nke epupụta, oge ntoju ọcha na akụkụ ala nke akwukwo, nke a bụ esemokwu nke phytophthora.
Ọchịchịrị na-acha odo odo na-egosi na ị ga na petioles. A na-ekpuchi mkpụrụ osisi na-acha aja aja na agba aja aja. Ngwurugwu a na-agbanye maka ịka nká pụkwara igosipụta ngwụcha blight ọ bụrụ na ọ malitere ịzụlite n'oge owuwe ihe ubi.
Na Europe, ma rute Russia, a malitere ịmalite tomato na ngwụsị afọ 30 nke narị afọ nke 19. Na ugbua na 1845, ihe omuku tomato nile furu efu n'ihi oge njo. Enwere m mkpa ịchọta ụzọ iji merie ọrịa a. N'okwu ahụ, ị ​​ga-agụ nkọwa zuru ezu banyere otu esi edozi ero a, ịchekwa tomato ma wepụ phytophorns na-adịgide adịgide, ma osisi ọ dị mkpa ka a gwọọ ya, yana foto na ihe ndị dị mkpa ka a ga-ewere iji chebe akwụkwọ nri n'ọdịnihu.
Ntuziaka maka nhazi akwụkwọ nri
Na ala oghe
Na griin haus
Ọ dị mma iji rie mkpụrụ osisi na-emetụta?
Ụzọ iji tillage
Isi ihe kachasị ewu ewu bụ ịlụ ọgụ na osisi
Tụlee ihe ndị na-egbu egbu - ọgwụ ọjọọ ndị dị irè n'ịlụso ọrịa ọgụ.
Ọnụ ya na 2018 ọdụ si 30 rubles na 10 grams. A na-eji ya eme ihe maka mgbochi. 5 g nke phytosporin diluted ke 10 lita mmiri na sprayed akuku.
Ma ọ bụrụ na mmiri ozuzo na-emeghe n'ala, ihe mgbochi a adịghị arụ ọrụ, ebe mmiri ga-asa ọgwụ ahụ site na osisi ahụ n'ime ala.
Mgbe ụbọchị 7-10 gasịrị, a ghaghị ime usoro ahụ ugboro ugboro.
Na-esote ọgwụ Hom.
Ọ dị irè ọ bụghị naanị na mmekọrita nke mbubreyo, kama ọ na-enye aka ịnagide nsogbu ndị ọzọ ubi.
Ọnụ ya na 2018 bụ 65 rubles maka 40 g.
Ọ dị mkpa iji ọgwụ 40 gwakọtara na lita 10 mmiri. Ego a zuru ezu iji mezie mita 10.
Oge ichere oge 5 ụbọchị.
Ihe ndozi ọzọ - ọgwụ na-echebe site na mbubreyo blight.
Ọnụ ya bụ 49 rubles maka 20 UAH.
Proton Extra bụ ezigbo fungicide. Ọ bụghị nanị ihe nchedo, nke dị mma maka mgbochi, kamakwa ịgwọ ọrịa.
A kwadoro ngwọta dị ka ndị a: 20 g nke ọgwụ na-diluted ke 10 lita mmiri. Nke a dị oke iji aka 1 kpaa. Ihe ndị na-arụsi ọrụ ike nke iji ọgwụ ọjọọ eme ihe na-adọrọ ngwa ngwa na epupụta, banye n'ime ma nọgide na osisi ahụ. Oge ime ihe ọgwụ ahụ dị ihe dị ka ụbọchị 12. Ọzọ, usoro a ga-eme ugboro ugboro. Ugboro ole? Ruo mgbe ị na-ewe ihe ubi.
Ịkwesịrị ịmalite agha n'oge ịgha mkpụrụ nke ala. A na-etinye mkpụrụ n'ime ihe ngwọta nke potassium permanganate maka nkeji iri abụọ, sụchaa ya na mmiri.
Taa, e nwere ọtụtụ ụzọ ndị mmadụ na-esi agwọ ọrịa. Tụlee ụfọdụ n'ime ha.
Onye inyeaka mbụ na ndị na-elekọta ubi bụ yabasị bee. Polvedra husk wụsara mmiri. Ozugbo mmiri ahụ gwọchara, nsogbu, tinye mmiri ruo lita 10 na olu. Ghaa akwụkwọ nke osisi ahụ site na ala.
Nke abụọ bụ whey, nke nwere lactic acid. Ọ na-echebe tomato ma gbochie mmepe nke phytophthora. N'ihi na 10 lita mmiri, lee 1 liter nke whey na 20 tụlee nke ayodiin. Ọ bụrụ na tomato oge ntoju n'oge ahụ, gbakwunye 5 g nke acid boric. Na-agbapụ akwụkwọ mbụ site na ala.
Ị nwekwara ike ịkwadebe ihe ngwọta ndị ọzọ maka ịpịnye, nke nwere ike ịgụnye components ndị a:
wepụ si n'osisi ash;
infusion nke yist (100g kwa ịwụ mmiri);
Ọ dị mkpa ịkụ osisi site na ala nke akwukwo site n'enyemaka nke ịgba. Ọ bụ n'ebe ahụ ka a na-ezobe ọnyá nke ọrịa ngwọta. Osisi bu oria site na ala elu. Ọ bụrụ na ị hụghị mmebi nke ebe ọzọ na osisi, ị ka na-agba osisi ahụ n'otu ụzọ ahụ.
Ma ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ị nwere 20 acres tomato. N'okpuru ohia ọ bụla ị gaghị arịgo. Mgbe ahụ were broom, tinye ya na ịwụ na ịkụ ihe ọkụkụ. Arụ ọrụ mgbe ụfọdụ. Ma oburu na enwere oru ozo, emesia onye obula n'ile ya anya.
Na foto ị nwere ike ịhụ ihe tomato blight dị ka:
Hụ mgbe ị na-ahọrọ iche tomato iche na-eguzogide ọgwụ na phytophthora. Dịka ọmụmaatụ, "Rich F1 Hut", "Fate Minor," "Beta".
Mgbe ị na-ahọrọ iche iche tomato, ị nwere ike ilekwasị anya n'ihe ndị na-egosi: mkpụmkpụ mkpụmkpụ, mmalite oge.
Rịba ama ntụgharị ihe ọkụkụ. Mgbe solanaceae, gbanye garlic ma ọ bụ yabasị.
Osisi nwere ike ime ka mmiri ghara ịgwụ, ọ dị gị mkpa ịghasị ibe gị. Poteto na tomato adịghị enyi.
Ihe ọdịiche dị n'agbata oghere bụ 30-50 cm, anya n'etiti ahịrị dị 70 cm.
Tomato oghe ala kụrụ na greenhouses.
Jiri naanị ahụ ike.
Ọ bụrụ na ịchọta ihe ịrịba ama mbụ nke mmebi site na phytophtora - mee usoro nrọ ọ bụla solanaceous.
Ezigbo oge wepụ ata ahịrị, obere epupụta. Ekwela ka ndim.
Ejila nitrogen nri nri ya. Iguzogide phytophthora na-ebelata budata.
Na-agbapụta ụtụtụ, n'ụzọ doro anya na onu. Ekwela ka mmiri banye na epupụta.
Tinye nri nke nwere phosphorus, potassium iji mee ka mgbochi tomato kwụsị ọrịa ahụ.
Ọtụtụ n'ime ihe ndị a na-eme maka nhazi tomato site na phytophthora na griin ha bụ otu ihe ahụ dị n'ọhịa, ma tụlee nuances.
Na-ekiri greenhouses. Ekwela ka mmụba na iru mmiri, na oge, wepu ngafe Ome, obere epupụta.
Họrọ griin ha iche iche tomato ndị na-eguzogide ọgwụ na mbubreyo blight:
"De Barao bụ nwa."
Ngwongwo kachasị na-eguzogide ọgwụ na phytophthora gụnyere ngwakọ:
Video banyere mgbochi ọgwụgwọ tomato site na mbubreyo blight:
Enweghị azịza doro anya maka ajụjụ a ma ọ bụ ka ị ghara iri tomato nke blight. Ọ bụrụ na emetụta nwa ebu n'afọ, ọ ga-abụ na ị chọghị iri ya n'onwe gị. A ghaghị icheta na phytophthora bụ ero, nke pụtara na mycelium agbatị ụgbụ ya n'ime ngwaahịa ahụ dum. O yikarịrị ka mkpụrụ osisi ahụ ọ emetụta kpamkpam. Mee nkwubi okwu.
Nri nri nke anụ ọhịa ahụ dị mma.
Egwu nke phytophtora anaghị atụ egwu oyi, snow, okpomọkụ. A na-ezobe ha na ala ruo mgbe oge ọzọ. Na "ọkụ" nke tomato gị riri n'afọ a nwere ike ịmeghachi ya n'oge ọzọ. Na mgbakwunye na mgbatị niile a dị n'elu, ọ dị mkpa iji mesoo ala.
N'oge mgbụsị akwụkwọ, igwu akwa dị iche iche a na-atụfu. Mgbe a gbatịchara ụkwụ ahụ, ọ ga-adị n'elu. Mgbe egwu ala shọvel ga-emikpu n'ime ala maka bayoneti dum. Ekwela ka ha nile, ma ọtụtụ esemokwu nwere ike ịnwụ n'oge oyi. N'oge opupu ihe ubi, tupu ịgha mkpụrụ tomato ahụ, a na-ekpuchi ala na ngwọta nke potassium permanganate. Ị ga-edozi ala n'ime griin ha, mechie windo na ọnụ ụzọ niile, ma kpuchie ihe ndina dị n'ala ebe a na-emeghe ya. Mmiri ozuzo adịghị egbochi usoro nkwụsị.
Nkwadebe Baikal EM-1 na Baikal EM-5 na-edozi ala tupu egwu ala na izu abụọ tupu ntu oyi.. Nkwadebe Baktofit, Trikhodermin, Fitoflavin, Fitosporin na-eme ala n'ala ọdịda mgbe egwu egwu. Ná mmalite oge opupu ihe ubi, a na-agwọghachi ọgwụgwọ ahụ ugboro ugboro. Otu esi emeso uwa ihe nro: gbasaa ego choro n'ime mmiri ma kpoo ala ruo omimi nke 10 cm. O di omimi nke na phytospore spores zoo.
Mgbe egwu ala ala a ga-emeso ya na Bordeaux ngwakọta. Tinyegharịa usoro a n'oge opupu ihe ubi. Ihe mejupụtara mmiri mmiri na-agụnye ọla kọpa sulphate. Ọ na-emebi ala ma na-egbo mkpa sọlfọ na ọla kọpa. A na-emeso ala Bordeaux naanị otu ugboro n'afọ ise ọ bụla.
A ghaghi icheta ya mgbe nile chọrọ ịzụlite ala 10 cm miri emi. Ma ọ bụghị ya, ihe niile abaghị uru. Esemokwu ga-adị na saịtị ahụ. Ọgwụ ọjọọ na-ebute ihe ọjọọ bụ tomato dị ize ndụ.
Ọ gaghị ekwe omume ịgbake na ya. I nwere ike ịdọ ya aka ná ntị, ị nwere ike ịmelata ya. Idebe ugbo na ime ihe mgbochi, ị ga-enwe oge owuwe ihe ubi.
"Trichodermin": nkọwa nke ngwaahịa na ntuziaka iji mee ihe
Mgbe niile na - arụpụta ezigbo ihe na akwa gị - nkọwa nke ụdị pink Bush F1
Nkọwapụta na foto nke mkpụrụ osisi kachasị mma maka mmanụ aṅụ
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Otu esi emeso blight na tomato: nzọụkwụ site nzọụkwụ